Izindaba - Ungasikhetha kanjani isikhwama se-duffle?
Isikhwama sokuhamba se-duffel ephathekayo senziwa i-polyester nenayiloni, futhi futhi savunyelwa ukuklama ngabo bonke ubujamo nemibala. Eqinisweni, isikhwama se-duffel siba nzima ngokwengeziwe kwabesifazane nakwabesilisa. Isikhwama se-duffel singagcina cishe yonke into efana nezingubo, izicathulo, izinwele nezinwele, izincwadi, amabhola nezinye izinsiza. Umbuzo ukuthi ungazikhethela kanjani isikhwama esisodwa esihle kakhulu. Okomuntu, badinga isikhwama sokuhamba esihle, sesilisa, esisebenzayo, esinemisebenzi ehlukahlukene nesesimanjemanje. Siphakamisa ukuthi uthole isikhwama se-duffle yesikhumba.
Isikhwama se-duffle sesitholakele isikhathi esithile. Kodwa-ke, lolu hlobo lwesikhwama se-duffle luya ngokuya luthandwa kakhulu. Kusho ubuhle, ukuguquguquka, kwesimanje, inkimbinkimbi nobuntu.
Uma ufuna ukuba nesisindo esincane, isikhwama se-duffel esiphathekayo nesimfashini, siphakamisa ukuthi uthenge isikhwama senayiloni noma se-polyester. Izinto ezingamelana namanzi ezifanelekayo zingakusiza ukuthi uhlukanise indawo eyomile nendawo emanzi. Uma ufuna ukubeka izingubo ezimanzi, izicathulo noma ithawula, kuyisinqumo esihle. Ngokuvamile, isikhwama se-duffel sesikhumba kanye nesikhwama se-nylon duffle singasetshenziswa njengesikhwama esihambisanayo sokuhamba ezindizeni, kepha ngicabanga ukuthi, isikhwama esiphathekayo se-nylon sibafanele kakhulu abesifazane, ngoba siyimfashini, ukunethezeka futhi kwesimanje.
Akunandaba ukuthi izikhwama zesikhumba duffle noma isikhwama se-nylon duffle, zisetshenziswa kabanzi. Ijimu yethu yezemidlalo ingumngane onokwethenjelwa ophelele wezemidlalo yangaphakathi nangaphandle. Yisikhwama esikhulu sehlombe sokuzivocavoca, ukuhamba, umsebenzi wezemidlalo, ithenisi, ibhasikidi, i-yoga, ukudoba, ukuzingela, ukukhempa, ukuhamba izintaba neminye imisebenzi eminingi yangaphandle
Kulula kakhulu ukuhlanza isikhwama se-duffel. Ngesikhwama se-duffle lesikhumba, udinga nje ukusula izinto ezingcolile. Isikhwama se-nylon duffle singagezwa. Uma unohambo olude, ngicabanga ukuthi i-duffle yesikhumba ikufanele kakhulu. Uma uzivocavoca nje ejimini, isikhwama se-nylon duffle sanele wena.
Isikhathi Iposi: May-20-2021